KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 05/08/2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:15 AM No comments:
ခိုဖလာလေးခိုတိုက်ပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ( ၆၂ ကြိမ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်များနေ့အမှတ်တရ)
သူရဲကောင်း အာဇာနည် ပီသစွာ ကရင်လူမျိူးတို့ အတွက် အသက်ပေးလှူသွားသော ဗိုလ်ကြီး စောသူးပီ အားလည်းကောင်း၊ ကျဆုံးလေပြီးသော ကရင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ တပ်ဗိုလ်တပ်မှူးများ၊ ဒေသခံပြည်သူများအားလည်းကောင်း သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ကျရောက်မည့် (၆၂)ကြိမ်မြောက် ကရင့်အမျိူးသားများ အာဇာနည်နေ့ မှာ ကျနော်တို1 . KAREN NATIONAL LEAGUE ( JAPAN ) KNL(JAPAN)............2. KAREN INFORMATION SPACE(JAPAN)KIS (JAPAN )့ အဖွဲ့ သားများမှ ကရင်တမျိူးသားလုံးနှင့်အတူ သူရဲကောင်းအာဇာနည်များအား ဦးညွတ်အလေးပြု ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ မြကွမ်းတောင် ဘုရားဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကရုဏာလက်များ ကွန်ယက် စာသင်ကျောင်းမှာ ပညာသင်နေတဲ့ အခြေအနေမဲ့ ကလေး အယောက် (၄၀) လောက်ကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းခေါ်သွားပြီး ပြည်မြို့နဲ့မိုင်(၁၀၀) ကျော် ဝေးတဲ့ ဥသျှစ်ပင် တောနက်ကြီးထဲမှာ သွားရောက် စွန့်ပစ်လိုက်တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
အဲဒီကလေးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည (၉) နာရီက ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက် စည်ပင်လူကြီး ၆ ယောက်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရဲ အယောက် ၂၀ လောက်က စည်ပင်အမှိုက်သိမ်းကားထဲမှာ စုပြုံထည့်ပြီး ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး မိဘနာမည် မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ကလေးတွေက ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့က နောက်နေ့ကျမှ သတင်းရတာ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားလေးတွေ ကျောင်းကို ရောက်မလာကြဘူး။ ၅ ရက်နေ့ကျတော့။ စုံစမ်းတာလည်း စုံစမ်းလို့ မရဘူး။ ၆ ရက်နေ့ကျတော့ ပြန်ရောက်လာရော။ ၁၅ ယောက် အယောက် ၂၀ လောက် ရောက်လာတယ်။ မေးကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ အဲဒီမှာ ဖမ်းသွားတယ်တဲ့။ ဖမ်းသွားပြီးတော့ အကုန်လုံးကို ကားအောက်ထဲမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းတယ်။ မထရဘူး။ လမ်းကို မမြင်ရဘူး။ အပြင်ကလူတွေလည်း အထဲကို မမြင်ရအောင်ထင်တယ်တဲ့။ လူအစိတ်လောက် ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ ကားကြီးကို မောင်းသွားတာ ဘယ်ကိုမောင်းလို့ မောင်းမှန်းမသိဘူးတဲ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ တရေး၊ နှစ်ရေးလောက်တောင် ရတယ်တဲ့။ နောက် သန်းခေါင် သန်းလွှဲလောက် ကျတော့ နေရာတစ်ခု အဲဒီမှာ မင်းတို့ဆင်းဆိုပြီး ဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆင်းခိုင်းပြီးတော့ သူတို့ကားက ပြန်ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိဘူး။ ကားလမ်းဘေးပေါ့တဲ့။ အဲတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွာရှိမယ် ထင်ရတဲ့ နေရာကို ခန့်မှန်းပြီးတော့ လျှောက်လာကြတယ်။ ကတ္တရာလမ်းအတိုင်း။ ရွာတစ်ရွာရောက်တော့ ကျွန်Qတော်တို့ အဲဒီမှာပဲ မိုးလင်းအောင် နေလိုက်တယ်တဲ့။ မိုးလင်းတော့မှ မေးကြည့်တော့ ပြည်ကနေ ရခိုင်ဘက်ကို ထွက်တဲ့ လမ်းမှာ ရောက်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဥသျှစ်ပင်ကို မှန်းပြီး အဲလမ်းအတိုင်း လျှောက်တာ တနေကုန်လမ်းလျှောက်ပြီး ဥသျှစ်ပင်ကို ရောက်တယ်။ ဥသျှစ်ပင်မှာ တောင်းရမ်းစားသောက်ပြီး ကားခလေး ဘာလေးရှာဖွေပြီး တချို့က ကားနဲ့ တချို့က လမ်းလျှောက်ပြီး ပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်"
ကလေးတွေအနေနဲ့ ပြည်မြို့ကိုပြန်လာရင် ထောင်ချပစ်မယ်လို့စည်ပင်လူကြီးက ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဖမ်းခံရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"ပြည်ဘက်ကို ပြန်လာရင်တဲ့ နင်တို့ကို ထောင်ထဲထည့်မယ်တဲ့။ နင်တို့ အုပ်စု ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရင်တဲ့ နင်တို့ကို မှတ်ပုံတင်လည်း ပေးမယ်။ အိမ်သစ်လုံးကြီးတွေလည်း ပေးမယ်။ ဆန်တွေလည်း ပေးမယ်တဲ့။ အဲဒီလို ပြောပါတယ်။ စည်ပင် ခေါင်းဆောင်ကြီးက"
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်မြို့ စည်ပင်သာယာဌာနကို RFA က ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအများစုဟာ မိဘမဲ့တွေဖြစ်ပြီး တောထဲမှာ ဒီအတိုင်း စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် အားလုံးနီးပါး ဖျားနာနေကြပါတယ်။ သူတို့ကို နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေး
အဖွဲ့က ဆေးဝါးနဲ့ အစားအသောက်တွေ ကူညီပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်(ကနေဒါ) ... 8/08/2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:42 PM No comments: